रामेछापका भुजेलले घाँटी थिचेर श्रीमतीको ह'त्या गर्नुको कारण यस्तो रहेछ ! - ramechhapkhabar.com
रामेछापका भुजेलले घाँटी थिचेर श्रीमतीको ह’त्या गर्नुको कारण यस्तो रहेछ !
घरायसी विवादको कारण आफ्नै श्रीमतीलाई घाँटी थिचेर हत्या गर्ने श्रीमान पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा ललितपुर महानगरपालिका–१० कुपण्डोल डेरा गरी बस्ने रामेछाप मन्थली नगरपालिका–१२ गेलु घर भएका ३५ वर्षीय एक्काराज भुजेललाई पक्राउ गरेको हो ।
उनकी श्रीमती ३५ वर्षीया जानुका भुजेल आफ्नै कोठामा मंसिर १६ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन ।
मृत भेटिकीको भुजेलको मृत्यु शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा एक्काराजले घाँटीमा कपडाले कसी हत्या गरेको खुलेको थियो । सोही लगत्तै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार पक्राउ परेका भुजेलमाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थप अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ ।
ओमिक्रोन भित्रियो, अब के गर्ने? यस्ता छन् विज्ञका सुझाव
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि फेला परेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन भेटिएको पुष्टि गरेसँगै विज्ञहरुले सचेत रहन सुझाब दिएका छन्।
दक्षिण अफ्रिकामा ओमिक्रोन भेटिएको १२ दिनपछि नेपालमा पनि यो भेरियन्ट भेटिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिण पूर्वी एसियामा ओमिक्रोनको उच्च जोखिम रहेको उल्लेख गरिसकेको छ।
नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएपछि जनमानसमा भने एक किसिमको त्रास फैलिएको छ। यो भेरियन्टका विषयमा धेरै कुराहरु अध्ययनकै क्रममा रहेका कारण पनि विज्ञहरुले अब थप सकर्तकता अपनाउनुपर्ने सुझाब दिएका हुन्। नयाँ भेरियन्ट देखिएका कारण अब सरकारका तर्फबाट के गर्न आवश्यक छ त? यस्तै नागरिकले पनि के के कुरामा ध्यान दिने त?
सरकारले भेरियन्टको फैलावट रोक्नलाई आवश्यक पर्ने सबै उपायहरु अपनाउन पर्ने, त्यसपछि संक्रमण देखिएको खण्डमा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सबै व्यवस्था मिलाउने, धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने लगायतका काम गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।